‘समर लभ’को गीत ‘साया’ सार्वजानिक - ConfuseNepal
२६ मंसिर २०७५, बुधबार २६ मंसिर २०७५, बुधबार कन्फ्युजनेपाल0Comments Saya, subin bhattarai, Summer Love
नेपाली चलचित्र समर लभको सार्वजानिक मिति नजिकिँदै गर्दा चलचित्र निर्माण टिमले प्रचार प्रसारलाई तीब्र बनाउदै चलचित्रको पहिलो गीत सार्वजानिक गरेका छन। प्रतिष्ठित लेखक सुबिन भट्टराईको चर्चित उपन्यास माथि बनेको चलचित्र ‘समर लभ’को पहिलो गीत सार्वजानिक गरिएको हो। युटुवमार्फत सार्वजनिक गरिएकाे ‘साया’ बोलको गीतमा स्वर, शब्द तथा संगीत पुष्पन प्रधानको रहेको छ। गायनमा पुष्पनलाई बानिका प्रधानले साथ दिएकी छन्।
विदेशको मनोरम पृष्ठभूमिमा खिचिएको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकार आशिष पिया र रेवती क्षेत्री फिचर छन्। गीतमा आशिष र रेवतीको रोमान्टिक अवतार देख्न सकिन्छ। भिडियोमा कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन रहेको छ।
यो चलचित्र प्रेमदिवसको अवसर पारेर माघ २५ गतेबाट सार्वजानिक हुने यो चलचित्रलाई मुस्कान ढकालले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा सुरजसिंह ठकुरी, नम्रता सापकोटा, आशिष पिया र रेवती क्षेत्रीको मुख्य भूमिका रहेको छ। आशिष र रेवतीले यसै चलचित्रबाट डेब्यु गर्दै छन्।
सुविनको कथालाई सामीप्यराज तिमल्सेनाले पटकथामा ढालेका हुन्। चलचित्रमा सुविन र सामीप्यको संवाद सुन्न सकिन्छ। ‘नाइटिंगेल इन्टरटेनमेन्ट’को ब्यानरमा निर्माण गरिएको चलचित्रमा खगेन्द्र श्रेष्ठ र इन्दु भण्डारी निर्माता रहेका छन् भने विनोद अधिकारी कार्यकारी निर्माता हुन्। सञ्जय लामाले खिचेको चलचित्रलाई अर्जुन जिसीले सम्पादन गरेका छन्।
← बियस राईको हिउमाझी
क्याप्टेनको पोष्टर हिरोइन विहिन सार्वजनिक भए पछि →
गोधुली कपको आज भएको खेलमा धरान १७ विजयी, शनिवार धर…
उपकुलपति प्रा. डा. ज्ञानेन्द्र गिरीमा कोरोना संक्र…